22 Devid wee sị: “Nke a bụ ụlọ+ Jehova bụ́ ezi Chineke, nke a bụkwa ebe ịchụàjà+ Izrel ga na-achụ àjà nsure ọkụ.”
2 Devid wee kwuo ka a kpọkọta ndị mbịarambịa+ bi n’ala Izrel, o wee mee ha ndị na-awa nkume+ ka ha na-awapụta nkume ndị ga-enwe akụkụ anọ há nhata+ maka iwu ụlọ ezi Chineke.
3 Devid kwakọbakwara ígwè nke ukwuu maka ntu a ga-eji kụọ ibo ọnụ ụzọ ámá dị iche iche nakwa maka ihe e ji akpagide ihe, ọ kwakọbakwara ọla kọpa nke ukwuu nke na a pụghị ịtụ ya n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀,+
4 tinyere osisi sida+ a na-apụghị ịgụta ọnụ; n’ihi na ndị Saịdọn+ na ndị Taya+ buteere Devid ọtụtụ osisi sida.
5 Devid wee sị: “Sọlọmọn nwa m bụ obere nwa, isi akabeghịkwa ya,+ ma ụlọ a ga-ewuru Jehova ga-adị ebube nke ukwuu,+ maakwa mma+ pụrụ iche n’ala niile. Ka m kwadebere ya ihe.” Devid wee kwadebe ihe dị ukwuu tupu ya anwụọ.+
6 Ọ kpọkwara Sọlọmọn nwa ya ka o nye ya iwu ka o wuoro Jehova bụ́ Chineke Izrel ụlọ.
7 Devid wee gwa Sọlọmọn nwa ya, sị: “Ọ dị m n’obi+ iwuru aha+ Jehova bụ́ Chineke m ụlọ.
8 Ma okwu Jehova gbochiri m, wee sị, ‘Ị wụfuwo ọbara nke ukwuu,+ i buwokwa oké agha dị iche iche.+ Ị gaghị ewuru aha m ụlọ,+ n’ihi na ị wụfuwo ọbara nke ukwuu n’elu ala n’ihu m.
9 Lee! E nwere nwa nwoke+ a ga-amụrụ gị. Ya onwe ya ga-abụ nwoke ga-enwe ezumike, m ga-emekwa ka o zuoro ndị iro niile gbara ya gburugburu ike;+ n’ihi na aha ya ga-abụ Sọlọmọn,+ m ga-enye Izrel udo+ na ịnọ jụụ n’ụbọchị ya.
10 Ọ bụ ya ga-ewuru aha m ụlọ,+ ya onwe ya ga-abụrụ m nwa,+ mụ onwe m ga-abụkwara ya nna.+ M ga-emekwa ka ocheeze nke ọbụbụeze ya+ n’Izrel guzosie ike ruo mgbe a na-akaghị aka.’
11 “Ugbu a, nwa m, ka Jehova nọnyere gị, ị ga-enwekwa ihe ịga nke ọma wee wuo ụlọ Jehova bụ́ Chineke gị, dị nnọọ ka o kwuru banyere gị.+
12 Ma, ka Jehova nye gị ezi uche na nghọta,+ ka o nyekwa gị ntụziaka banyere Izrel, ka i debekwa iwu Jehova bụ́ Chineke gị.+
13 Ị ga-enwe ihe ịga nke ọma+ ma ọ bụrụ na i lezie anya wee debe ụkpụrụ+ na mkpebi ikpe+ Jehova nyere Mozis n’iwu+ banyere Izrel. Nwee obi ike, dịkwa ike.+ Atụla egwu,+ atụkwala ụjọ.+
14 Lee, n’oge m nọ ná mmekpa ahụ́,+ m kwadebere otu narị puku talent ọlaedo+ na otu nde talent ọlaọcha maka ụlọ Jehova, a pụghịkwa ịtụ ọla kọpa+ na ígwè+ n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ n’ihi na ha dị nnọọ ukwuu; m kwadebekwara osisi na nkume, ma ị ga-etinyekwu ihe na ha.
15 I nwekwara nnọọ ọtụtụ ndị ọrụ, ndị na-awa nkume na ndị na-edo nkume+ na ndị ọkwá nkà na onye ọ bụla nwere nkà n’ụdị ọrụ ọ bụla.+
16 A pụghị ịgụ ọlaedo na ọlaọcha na ọla kọpa na ígwè dịnụ ọnụ ma ọlị.+ Bilie mee ihe,+ ka Jehova nọnyekwara gị.”+
17 Devid wee nye ndị isi niile nke Izrel iwu ka ha nyere Sọlọmọn nwa ya aka, sị:
18 “Ọ̀ bụ na Jehova bụ́ Chineke unu anọnyereghị unu,+ ọ̀ bụ na o mebeghịkwa ka unu zuru ike gbaa gburugburu?+ N’ihi na o nyewo ndị bi n’ala a n’aka m, e meriwokwa ala a n’ihu Jehova+ nakwa n’ihu ndị ya.
19 Ugbu a, werenụ obi unu na mkpụrụ obi+ unu chọọ Jehova bụ́ Chineke unu,+ biliekwanụ wuo ebe nsọ+ Jehova bụ́ ezi Chineke,+ iji bubata igbe+ ọgbụgba ndụ Jehova na arịa ndị dị nsọ nke ezi Chineke n’ụlọ e wuuru aha+ Jehova.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D13%26Chapter%3D22%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl